On aqoonsiga Yuhuudda ee waqtigeena iyo guud ahaan - Rabbi Michael Avraham
On aqoonsiga Yuhuudda ee waqtigeena iyo guud ahaan
Tacliinta - 2014
"Qofku subixii si lama filaan ah ayuu u kacaa oo wuxuu dareemayaa inuu dad yahay, oo socod bilaabay"
Haddii ay jiraan kibbutzim oo aan garanayn waxa Yom Kippur yahay, ma garanayaan waxa Shabbat yahay mana garanayaan waxa rajo ah. Bakaylaha iyo doofaarradu waa la dhalaa. Ma xidhiidh bay la leeyihiin aabbahood?… Array? Array waa shay muqadas ah? Waxay iska gooyeen wixii ina soo maray oo dhan, waxayna waydiisanayaan Tawreed cusub. Haddii aysan jirin Shabbat iyo Yom Kippur, haddaba muxuu Yahuudi ku yahay?
(Khudbadii Rabbi Shach ee Bakaylaha, Yad Eliyahu, 1990)
Maqaalkani waxa uu si sax ah u qornaa waagii ay gorgortanka dheeraadka ahi noo socdeen annaga iyo falastiiniyiinta, laakiin markan su'aalaha aqoonsiga ee keenay ayaa aad ugu dhow dusha sare. Sababta ugu weyn ee qaraxa Israa’iil ayaa ah dalabka ah in dowladda Israa’iil ay u aqoonsato dowlad Yahuud ah. Dalabkaas waxaa ka mid ah, doodaha falastiiniyiinta iyo canaasiirta kale, kuwaas oo inooga baahan in aan marka hore qeexno waxa iyo cidda Yahuudda ah ee indhaheenna ah inta aynaan ka dalban dadka kale. Xaaladdan oo kale, qaar ayaa noo soo bandhigaya sida faraca Khazars, sidaas darteed waxay wiiqayaan xaqiiqada taariikhiga ah ee sheekada Yuhuudda, taas oo ah, in aan dhab ahaantii nahay sii socoshada dabiiciga ah ee Yuhuuddii hore ee ku noolaa halkan dhulka Israa'iil. Dhanka kale, Falastiiniyiintu waxay sidoo kale soo bandhigaan aqoonsi qaran oo taariikhi ah (waxooga dhalanteed ah) oo saldhig u ah doodooda. Waxaan tusaale aad u xiiso badan ka helay maqaalka Eldad Beck, kaasoo qeexaya wada hadal dhex maray wasiir Tzipi Livni, oo wada xaajoodka u qaabilsan Falastiin iyo Saib Erekat, oo ah madaxa wada xaajoodka dhinaca Falastiin. :
Xubnaha weftiga ballaaran ee Israa’iil uga qeybgalaya shirka amniga ee Munich ayaa xalay la yaabay kadib markii xubin ka tirsan kooxda wada xaajoodka falastiiniyiinta, Saeb Erekat, uu Livni ku dharbaaxay in isaga iyo qoyskiisuba ay ahaayeen reer Kancaan, ayna Jericho ku noolaayeen 3,000 oo sano (!?) ka hor intii aysan gaarin Bnei. Israa'iil oo uu hoggaaminayay Yehoshua Ben Nuun. Intii lagu guda jiray dood ku saabsan geeddi-socodka nabadda ee Bariga Dhexe oo ay ka qaybgaleen labadooda, Erekat wuxuu bilaabay inuu ka hadlo sheekooyinka kala duwan ee taariikhiga ah ee labada dhinac, Israa'iil iyo Falastiin, wuxuuna ku dooday in falastiiniyiinta iyo wakiilkiisu ay dhab ahaantii ka soo jeedaan reer Kancaan sidaas darteedna ay leeyihiin. Xuquuqda ay ku leedahay dhulka falastiiniyiinta ayaa ka badan kuwa Yuhuuda. Livni waxa uu ku jawaabay in Israa’iil iyo falastiiniyiintu aanay waydiin sheekada ka cadaalad badan, balse ay tahay sidii loo dhisi lahaa mustaqbal. “Annaga nabada qaab jacayl uma eego. Caynisnimadu kama yara khatarsan tahay nafisnimada. "Israa'iil waxay doonaysaa nabad, sababtoo ah waxay ku jirtaa maslaxaddeeda."
Marka laga soo tago doodda la taaban karo, waxaa jira dareen ah in Livni ay isku dayeyso in ay iska ilaaliso doodaan xishoodka ah sababtoo ah waxay u maleyneysaa in aqoonsiga qaranku yahay asal ahaan nooc sheeko ah, sidaas darteed ka doodista ku saabsan tahay mid aan khusayn. Meeshaan xaq iyo baadil midna kuma jiro, waayo sida maanta caadada u ah in ummad kastaa ay u malaynayso in ay iyadu samaysatay oo aan cid kale u bannaanayn. Qaar badan ayaa sheegaya in xitaa aqoonsiga Yuhuudda ay jiraan godad ay ka buuxaan sheekooyin kala duwan (inkasta oo qiyaasta ay aad uga duwan tahay tusaalaha Falastiiniyiinta). Sheegashada Golda, Ben-Zion Netanyahu iyo qaar kale oo badan, ee ah in aysan jirin wax la yiraahdo falastiiniyiin, ayaa maanta u muuqda mid duugoobay oo soo jireen ah. Ma aha sabab kasta oo ka mid ah natiijooyinka taariikhiga ah, laakiin sababtoo ah dadka iyo jinsiyada ayaa ah fikrado lagu qeexay oo kaliya de facto.
Su'aalaha aqoonsiga, taariikhda iyo dhaqanka, ayaa diidaya inay naga tagaan. Meel dheer bay isa soo taageen oo mar kale ayay nagu soo duuleen. Waxay u muuqataa in ku dhawaad ​​meelna adduunka ka mid ah su'aalaha aqoonsiga qaranka mashquulin dadka sida jiritaan ahaan ka mid ah Yuhuudda, iyo dabcan in Israa'iil sidoo kale. Doodaha waxaa laga yaabaa in laga heli karo haddii aad tahay Belgian dhab ah iyo in kale, laakiin inta badan sida qalab lagu garaaco kuwa ka soo horjeeda, ama qayb ka mid ah jacaylka dhaqdhaqaaqa qaran-qaran. Way adagtahay in xitaa la qiyaaso koox ama qof ay si dhab ah ula halgamayaan su'aasha ah Belgian, ama Liibiyaan, dhab ah oo run ah.
Anaga oo tusaale u soo qaadanayna aqoonsigeena shakhsi ahaaneed, midkeen midna ma go'aansan in aan ahay Mikaa'iil Ibraahim oo run ah iyo in kale, maxaan dhab ahaantii Michael Abraham ku ahay? Waa maxay qeexida Michael Abraham, oo miyaan ka jawaabayaa? Aqoonsiga shakhsi ahaaneed waa is cad oo uma baahna qeexid. Si la mid ah waa run marka la eego aqoonsiga qoyska. Qof kasta oo ka tirsan qoyska Ibraahim waa sidaas oo kale, waana sidaas. Su'aalaha ku saabsan shuruudaha iyo qeexitaannada macnaha guud waxay u muuqdaan kuwo xag-jir ah. Waxa aan helay aragti ah in quruumaha intooda badan tani ay sidoo kale tahay arrin la xiriirta aqoonsiga qaranka. Way joogtaa, waana taas. Haddaba waa maxay waxa ku saabsan iyada, aqoonsiga yuhuudda, taas oo had iyo jeer nagu dhibaysa jiritaan ahaan? Suurtagal ma tahay haba yaraatee in dood wax ku ool ah oo caqli-gal ah laga yeesho mawduucan?
Maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan qeexo dhibaatooyinka hab-raac ee ku lug leh doodda aqoonsiga Yuhuudda, waxaanan soo bandhigi doonaa falanqaynta caqli-galnimada iyo falanqaynta mudnaanta dhinaca kale, arrinta iyo macnaheeda. Sidaa darteed ma geli doono tafaasiil iyo nuux-nuuxsi si aanan u lumin sawirka weyn, oo aan u ogolaado in aan isticmaalo jumlado macquul ah oo ii muuqda iyada oo aan u baahnayn ilo gaar ah, Tawreed ama feker guud. Baahida aan u qabo mawduucan, gaar ahaan siyaasadda iskahorimaadka Israa'iil iyo Falastiin, halkan looguma samayn ujeeddooyin caqli-gal ah laakiin si loo muujiyo sheegashooyinka ka soo bixi doona erayadayda. Anigu mawqif aan halkan ka caddaynayo khilaafka laftiisa iyo sida loo xalliyo.
Doodda dhaqan-falsafo iyo dood-xalakhi-Tawreed
Fikradda ugu weyn ee cinwaanka doodda, aqoonsiga Yuhuudda, waa mid aan caddayn. Wada hadalka ku saabsan waxa loo qaadan karaa ugu yaraan laba jiho: a. Aqoonsiga qaranka Yuhuuda ee falsafada-qawmiyad-dhaqanka. B. Aqoonsiga Yuhuudda marka loo eego macnaha Tawreed-halakhic (kuwo badan ma aqbali doonaan malaha ah in kuwani yihiin laba doodood oo kala duwan). Tani dabcan waxay ku xidhan tahay su'aasha (madhalays aragtidayda) ma Yuhuuddu waa diin ama ummad, taas oo aanan halkan ku taaban doonin. Kuwani maaha laba doodood oo kala duwan, laakiin waxay muujinayaan laba hab oo wada hadal oo kala duwan: in dooda lagu qabto hab fikradeed guud oo dheeraad ah ama hab xalaal-Tawreed.
Guud ahaan, aqoonsiga diineed ayaa ka sahlan in la qeexo aqoonsiga qaranka. Tani waa sababta oo ah aqoonsiga diineedku waxay ku salaysan yihiin qiyamka iyo caadooyinka la wadaago, iyo gaar ahaan ficillada iyo caqiidooyinka la isku halleyn karo (inkasta oo habab kala duwan oo tafsiir ah. Ma jiraan wax nolosha ah oo run ahaantii fudud). Taas bedelkeeda, aqoonsiga qaranku waa fikrad ka duwan qaab-dhismeedka, wuxuuna ku salaysan yahay taariikhda, dhulka, dhaqanka, diinta, luqadda, sifooyin gaar ah iyo qaar kale, ama qaar isku dhafan oo kuwaas oo dhan ah. Sida caadiga ah aqoonsiga qaranku lama xidhiidho mabaadi'da maskaxeed ee caadiga ah ama la taaban karo, iyo hubaal ma aha mabaadi'da u gaarka ah dad gaar ah. Laakiin dhaqanka, luqadda, sifooyinka nafsiga ah ee nooc ama mid kale, waa doorsoomayaal iyo madmadow, inta badanna waxay la wadaagi karaan jinsiyado kale. Waxaa intaa dheer, qaar ka mid ah sifooyinkaas way kala duwan yihiin, oo shakhsi ama shirkad ayaa laga yaabaa inay qaataan ama ka tagaan qaarkood. Haddaba kee baa ka mid ah shuruudaha lagama maarmaanka u ah aqoonsiga qaran?
Tani waxay sidoo kale waa kiiska macnaha Yuhuudda. Aad bay u fududahay in la qeexo aqoonsiga diinta Yuhuudda. Kuwa waajibka ku ah inay ilaaliyaan mitzvos waxay leeyihiin aqoonsi Yuhuudi ah. Immisa mitzvos ayay tahay in la ilaaliyo? Tani waa su'aal aad u dhib badan, waxayna noqonaysaa mid aad u dhib badan qarnigeenna kakan, laakiin waa su'aal labaad. Ballanqaadka mabda'a ah ee mitzvos waa qeexitaan ku filan baahidayada. Waxaa intaa dheer, marka la eego macnaha halakuuqa su'aasha aqoonsiga, xitaa kan diinta, ma laha wax muhiim ah. Waxa jirta qeexid xalaal ah oo xalaal ah oo ku saabsan dhammaan noocyada waajibaadka diiniga ah, cidda loo jeedinayo iyo cidda ay ku xidhan yihiin. Su'aalaha aqoonsiga diintu si toos ah ugama soo baxaan adduunka fikradaha Tawreedka-halakhic.
Haddii dhinaca aqoonsiga diiniga ah aysan jirin muhiimad xalaal ah oo su'aasha ah, markaa way fududahay oo maaddad ah oo ku saabsan su'aasha aqoonsiga qaran. Waa maxay cawaaqib xumada ka dhalan karta go'aanka ah in kooxi leedahay aqoonsi qaran oo Yuhuudi ah? Halakhah, su'aasha ah cidda ilaalinaysa ama aan ilaalin mitzvos waxay leedahay macno, iyo weliba si ka sii badan su'aasha ah cidda ay tahay ama ay tahay in aan haysanin. Su'aasha aqoonsigu ma laha jawaab xalaal ah oo cad, mana lahan wax saamayn ah oo toos ah oo kaligeed ah.
Marka laga eego dhinaca halakiinta, Yuhuudi waa qof ay dhashay hooyo Yuhuudi ah ama si sax ah u soo islaamay. Kani waa haybtiisa marka la eego macnaha xalaasha ah, wax dhib ah kuma laha wuxuu sameeyo, gaar ahaan haddii uu haysto ama aanu ilaalinayn mitzvos. Xagga xalaasha ah waa inuu dabcan u fiirsadaa, waana laga wada hadli karaa inuu dembiile yahay kii aan yeelin iyo waxa la gudboon. Laakiin su'aasha ah in uu yahay aqoonsi ma aha. Erayada ay ka midka yihiin "ka soo baxay reer binu Israa'iil oo dhan" waxay u badan yihiin sarbeeb, mana laha macno dhab ah oo la taaban karo oo ku saabsan halakhah. Oo xataa hadday xoogaa macne leeyihiin, xalaqadu waxay ku qeexdaa habraaceeda farsamada.
Aqoonsiga Qaran: Farqiga u dhexeeya heshiisyada iyo waxyaabaha lama filaanka ah
Ilaa hadda waanu ka falanqeynay su'aalaha aqoonsiga marka laga eego dhinaca diiniga ah ee xalaasha ah. Marka la eego falsafada guud, danta ugu weyni waa aqoonsiga qaranka ee maaha mid diimeed. Waxaan hore u soo sheegay in haybta qaranku guud ahaan tahay fikrad aan caddayn oo adag in la qeexo. Halkan waxa aan inta badan diiradda saari doonaa laba tiir oo xag-jir ah oo la xidhiidha qeexida aqoonsiga qaran: habka la isku raacsan yahay (conventionalist) iyo habka lagama maarmaanka ah (macnaha).
Su'aasha qarannimada iyo aqoonsiga qaranku waa su'aal cusub oo asal ahaan casri ah. Waayadii fogaa, sababo kala duwan dartood, dadku waxay si dhib leh isu weydiin jireen waxa ay tahay aqoonsiga qaran iyo sida loo qeexo. Dunidu waxa ay ahayd mid fadhiid ah, dadku ma samayn wax badan oo noloshooda ah, oo ay ku adagtahay in ay la kulmaan aqoonsigooda aqoonsiyo tartamaya. Waxaa shaki ku jiraa in ay miyirkooda ku jirto fikrad gooni ah oo aqoonsiga qaran ah, xitaa haddii ay isbeddel ku yimaaddeen aqoonsigaas waxay ku yimaadeen si kedis ah oo dabiici ah oo miyir la'aan ah. Aqoonsiga qaranku wuxuu ahaa mid dabiici ah, oo la mid ah aqoonsiga shakhsi ahaaneed iyo midka qoyska ee aan kor ku soo sheegnay. Sooyaalka diinta ayaa sidoo kale ka qayb qaatay xiisaha, maadaama dadka intooda badan ay lahaayeen aqoonsi diimeed. Adduunyadii hore waxa la isku odhan jiray boqornimadu waa hibo Eebbe ugu deeqay inta u dhalatay inay boqor noqdaan, sidaas oo kale waa dal iyo diinteenna iyo xidhiidhka aynu la leenahay. Waxaas oo dhami waxay la abuurmeen aduunka lixdii maalmood ee Bilowgii, waxaana loo qaatay si fudud oo loo qaatay.
Waaga casriga ah ee ay ku soo korodhay wadaninimada Yurub iyo guud ahaan caalamka, su'aashu waxay bilowday inay si buuxda u sabbayso. Dhibta lagu qeexi karo aqoonsiga qaran waxa ka dhashay jawaabo inta badan ka dhex taagan laba tiir: ta kowaad waa tiirka caadiga ah ee u arka aqoonsiga qarannimo wax ku dhisan heshiis ku dhow gardaro. Mar haddii ay koox isu aragto dad, ugu yaraan hadday wakhti go’an ku ekaato, waayo markaas waa dad. Abwaan Caamir Gilboa, 1953-kii, markii la dhisay dawladda, wuxuu ku tilmaamay sidan: "Nin si lama filaan ah u kacay subaxdii oo dareemay inuu yahay dad, oo bilaabay inuu socdo." Tiirka kale waa aragtiyo la taaban karo oo u arka aqoonsiga qaranka inuu yahay wax dabiici ah oo habaysan, sida aqoonsiga shakhsi ahaaneed. Marka la is weydiiyo wax badan oo ku saabsan dabeecadda curiyaha "dabiiciga ah", jinsiyadda, jacaylka mararka qaarkood waxay yimaadaan metaphysics. Marka loo eego hababkan, jinsiyaddu waxay leedahay jiritaan metaphysical dareen ahaan, wax la mid ah fikradda Plato, iyo shakhsiyaadka ay ka kooban tahay qaranka ayaa lagu daray ciddan sababtoo ah isku xirka metaphysical ee ay la leeyihiin. Faras kastaa wuxuu ka tirsan yahay kooxda fardaha iyada oo aan loo baahnayn in si cad loo qeexo waxa farasku yahay. Isagu waa faras kaliya, waana taas. Sidoo kale, qof kasta oo Belgian ah wuxuu ka tirsan yahay kooxda Belgian isagoon samayn wax qeexid ah. Ma aha oo kaliya sababtoo ah way adagtahay in la soo jeediyo qeexitaanno, laakiin sababtoo ah maahan lagama maarmaan. Aqoonsiga qaranku waa fikrad dabiici ah sida aqoonsiga shakhsi ahaaneed iyo kan qoyska.
Waxaa muhiim ah in la fahmo in ereyada Amir Gilboa ee qeexaya baraaruga qaranku sidoo kale lagu qori karo qaabdhismeedka fikradda-metaphysical, laakiin halkan waxay noqon doontaa baraaruga khibradeed, taas oo isla xaqiiqada metaphysical ee hore u hurday ay dhex gasho miyirka dadka. . Waxay ku baraarujisaa iyaga oo waxay rabaan inay ku gartaan si dhab ah, oo la taaban karo oo ku saabsan dareenka siyaasadeed iyo bulsho ee hay'adaha. Si lama filaan ah ayuu qofku u kacay oo dareemaya xaqiiqada metaphysical (oo weligeed run ahayd) in uu yahay dad, oo bilaabay socod. Jaceylka baraaruga qaranka ninku wuxuu ka kacay dareenka ka soo kaca koomo, si ka duwan fikradda la isku raacsan yahay ee uu ka kacay ayaa loo fasirtay inuu dhulka ka kacay si uu u bilaabo socodka. Dooddu waxay ku saabsan tahay aasaasku ma baraarujin baa mise waa dhismo.
Aqoonsiga qaranka: habka la isku raacsan yahay iyo muujintiisa
Dhinaca khariidadda lagu heshiiyey waxay taagan yihiin mufakiriinta sida Benedict Anderson, buuggiisa saamaynta leh Bulshooyinka mala awaalka ah (1983), iyo qaar kale oo badan ayaa raacay. Kuwani waxay diidaan jiritaanka nuxurka muhiimka ah ee fikradaha sida jinsiyadda iyo aqoonsiga qaranka. Kuwa habkan qabtaa waxay u arkaan dhalasho nooc ka mid ah khayaali-male-awaal ah oo ku abuurmay oo lagu soo koobay miyirka kooxaha qaar inta lagu jiro taariikhda (caadi ahaan la wadaago). Waxaa muhiim ah in la fahmo in taasi aysan ahayn in la yiraahdo baraaruggani ma ansaxayo, ama in la dhayalsado codsigeeda iyo sheegashooyinka. hubaal maaha. Aqoonsiga qaranku wuxuu u jiraa sida xaqiiqo nafsi ah oo muhiim u ah dadka, sidaas darteed dad badan ayaa aaminsan inay mudan tahay ixtiraam. Laakiin asal ahaan waa wax aan loo baahnayn. Haddaba si aan macnihiisa u soo koobo, akhristuhu wuu iga cafinayaa haddaan dhawr qodob ku soo qaado arrimaha taagan.
Tusaalaha cad ee hab ka tirsan dugsiga la isku raacsan yahay waa aragtida Prof. Shlomo Zand. Zand waa taariikhyahan ka socda Jaamacadda Tel Aviv, oo hore uga tirsanaan jiray wareegyada Compass kana tirsan wareegyada bidix ee xagjirka ah ee Israa'iil. Buugiisa muranka dhaliyay Goorma iyo sidee loo allifay dadka Yuhuuda? (Lagdan, 2008), Zand waxa uu doortay in uu falanqeeyo tusaale si gaar ah caqabad ugu ah tesis Benedict Anderson. Wuxuu isku dayayaa inuu halkaas ka caddeeyo in dadka Yuhuudda ah ay yihiin bulsho khayaali ah. Hawshani waxa ay si gaar ah u hami weyn tahay, wax kasta oo ra’yigeenna ah ee ku aaddan mawqifka Anderson, haddii ay jirto tusaale adduunka (galbeedka) oo si weyn uga soo horjeeda qoraalkiisa waa dadka Yuhuudda ah. Runtii, fikradayda (iyo ra'yiga qaar kale oo badan) Buuga Zand wuxuu magac xun ku siinayaa cilmi-baarista taariikhiga ah, gaar ahaanna wuxuu wiiqayaa farqiga aasaasiga ah iyo midka muhiimka ah ee u dhexeeya fikirka iyo cilmi-baarista tacliinta. Laakiin waxa u oggolaanaya inuu sameeyo waxaas oo dhan waa mugdiga ku jira fikradda aqoonsiga qaran.
Haddii aan ku sii wadno dhacdooyinka hadda jira, tusaale gaar ah oo cad oo ka yimid cirifka kale, mid si fiican u xaqiijinaya aragtida Anderson, waa dadka reer Falastiin. Falastiiniyiintu waa dad si cad ugu salaysan aqoonsi male-awaal ah (taas oo mararka qaarkood ay ku jirto khiyaali dhab ah, sida ka mid ahaanshaha Falastiiniyiinta ama Kancaaniyiinta kitaabiga ah, ama xataa da'dii hore), Abuuray ku dhawaad ​​ka baxay waxba marka la eego taariikhda.
Waxa macno leh in halkan lagu tilmaamo macnaha caadiga ah ee ra'yiga la isku raacsan yahay. Bilawga buuggiisa, Zand waxa uu u huray kitaabka: "Xuska dadka deggan al-Sheikh Mu'anis ee ka soo barakacay waayihii fogaa ee aan ku noolahay oo aan ka shaqeeyo wakhtiga dhow." Codku waa mid sifayn ah oo deggan, wejigiisana wuxuu u muuqdaa mid aan dhib u arkin. Haddii haybta qaranku ay yihiin kuwo male-awaal ah, markaa hal haybta male-awaalka ah ayaa riixaya kan kale. Way timaadaa wayna baaba'aysaa. Aduunku waa sidaan. Sida laga soo xigtay isaga, kuwani waa xaqiiqooyin nafsi ah oo aan ahayn qiyamka metaphysical ama run, xitaa xitaa xaqiiqooyinka taariikhiga ah. Tani waa dhinaca kale ee lacagta caadiga ah ee u arka aqoonsiga qaranka sida male-awaal.
Gunaanadku waxa weeye, haddii aqoonsiga qaranku dhab ahaantii yahay heshiis shakhsi ah oo gar-daran, markaa laba (inkasta oo aan daruuri ahayn) gunaanad hoose ayaa laga soo saari karaa (in kasta oo aan daruuri ahayn): 1. Hay'adaha noocaas ah ma laha xuquuq dhab ah. Ummaduhu waa makhluuq aan lafdhabar lahayn, kuwaas oo aan lahayn jiritaan ka baxsan male-awaalka dadka. 2. Aqoonsiga qaranku waa qayb ka mid ah haybta dad badan oo xaqiiqo ah in aanay jirin hayb qaran oo kale (oo dhab ah), markaa in ay tahay hayb male-awaal ah macnaheedu maaha in sheegashada iyo sheegashada hay’adahaas ay noqon karaan. la dhayalsaday.
Si mucjiso ah, dad tiro yar oo habkan leh ayaa u oggolaanaya inay isticmaalaan si ay u dhaleeceeyaan hal aqoonsi (haddii Zand, Israa'iil-Yuhuudda) oo ay ku eedeeyaan inay qarsoodi yihiin shir-bulsheed oo aan caadi ahayn oo la mala awaalay, annaga oo nafaheena u abuurnay si aan u ogaanno, iyo Isla mar ahaantaana laga soo bilaabo isla aragtidaas, Aqoonsiga kale ee male-awaalka ah (Falastiiniyiinta, tusaale ahaan Zand). Caqli-xumada waxa sii xumaynaysa in dadka Yuhuuda gaar ahaan ay yihiin tusaalaha ugu guulaha yar iyo dadka Falastiiniyiinta oo ah tusaalaha ugu cad ee qarannimada la mala awaalay. Waxaan ku celinayaa oo aan ku nuuxnuuxsanayaa in aanan halkan ugu talagalin in aan kaga hadlo xidhiidhka saxda ah ee beeshan ay sheeganayso aqoonsi siyaasadeed, maadaama ay tani tahay su’aal caadiya-qiimo-siyaasadeed. Halkan waxa aan kaga hadlayaa oo kaliya sharraxaadda taariikhiga ah-dhaqanka iyo dhaleecaynta isku-xidhnaan la'aanta doodda.
Aqoonsiga Qaranka: Habka Muhiimka ah
Ilaa hadda waxa aan garab taaganahay hab-dhaqameedka iyo dabeecadda dhibka leh ee uu leeyahay. Malaha si sax ah dhibaatooyinkan dartood, qaar waxay u qaataan fikradda aqoonsiga qaran ee mawqifyada metaphysics-ka. Baraaruga qaranka ee Yurub, iyo sidoo kale baraaruga qaranka Yuhuuda ee ka dhex muuqday dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda oo ay si weyn u saamaysay jacaylka wadaniga ah ee reer Yurub. Dhaqdhaqaaqyadani waxay inta badan muujinayaan mawqif ah in qarannimadu ku dhisan tahay qayb metaphysical (dad, qaran). Tibaaxaha aadka u ba'an ee aragtidan waxay ka soo baxaan tibaaxaha faashiistaha (Germankii Hitler, Bismarck, iyo qaar kaloo badan oo iyaga ka horreeyay, iyo sidoo kale Garibaldi Talyaaniga iyo qaar kale). Dabeecadahan ayaa lagu muujiyay fikirka Tawreed ee Rabbi Kook iyo ardaydiisa. Kuwani waxay qaateen fikraddan sarbeebta ah, waxayna u rogeen nuxurka caqiidada Yuhuudda. Dhimbiil yahuudda, mugdi, qarsoon, inkira oo la cadaadiyo, si kastaba ha ahaatee, waa waxa qeexaya diinta Yuhuudda. Wanaagga reer binu Israa'iil iyo asalka iyo hiddaha u gaarka ah ee qof kasta oo Yuhuudi ah, ayaa noqday ku dhawaad ​​halbeeg gaar ah oo loogu talagalay Yuhuudda, gaar ahaan marka dhammaan sifooyinkii soo jireenka ahaa (adeegga) la waayay, ama ugu yaraan ay joogsadeen inay noqdaan wax-soo-saarka guud ee la isku raacay. "Knesset ee Israa'iil" waxay ka soo noqotay tusaale ahaan oo waxay u noqotay tibaax ontological fikradda sarbeebaha Yuhuudda.
Waxaan halkan ku soo bandhigayaa habka wax ku oolka ah ee looga jawaabayo midda la isku raacsan yahay, laakiin dhanka dhidibka taariikhiga ah waxaa cad in fikradda la taaban karo (in kasta oo aan had iyo jeer ahayn metaphysical) ay ka horreyso dhaqan-dhaqameedka. Taariikh ahaan, waxay ahayd habab caadi ah oo soo baxay iyaga oo ka jawaabaya habab la taaban karo. Haddii habka la taaban karo uu si aad ah loogu aqoonsaday casriyeynta iyo baraarujinta qaranka, markaa caadadu waa qayb ka mid ah "dhaleeceynta cusub" ee qaran ka dib oo lagu aqoonsaday booska loo yaqaan postmodernism.
Paradox aasaasiga ah
Ilaa hadda waxaan qeexay labada aragtiyood ee iska soo horjeeda. Xagee isku dhacaan? Maxay ku kala duwan yihiin? Waxaan u maleynayaa in heerkan aan ku jirno yaab. Mudnaanta kuwa leh habka labaad, kuwa muhiimka ah, waa laga dhaafay raadinta qeexitaannada aqoonsiga qaran. Ka dib oo dhan, sida ay qabaan, qof kasta oo xiriir la leh fikradda metaphysical (Knesset ee Israa'iil) waa Yuhuudi. Xataa marka la isku haysto ee ah beddelka, waxaan mar kale iyo mar kale maqalnaa doodda "Fariinta Israa'iil" oo saldhig u ah dalabka fududaynta habka beddelka, oo aan la yaab lahayn waxay inta badan ka timaaddaa goobo u dhow Rabbi Kook. Waa metaphysics na qeexaya sida Yuhuudda, oo sidaas daraaddeed waxaan ka dhaafnay baahida qeexitaanka barnaamijka. Jacaylka metaphysical, aqoonsiga Yuhuuda waa xaqiiqo dhab ah oo aan hoos imanayn nuxurka, qiyamka, ama shuruudo kale. Dabcan, kuwa leh dabeecadda noocan oo kale ah waxay rumaysan yihiin in Yuhuudi kastaa ay tahay inay ilaaliso qiyamka iyo mitzvos ee Tawreed, laakiin tani wax shaqo ah kuma lahan qeexitaankiisa sida Yuhuudi iyo aqoonsigiisa.
Dabcan, xitaa marka loo eego fikradaha maadiga-metaphysical, sifooyin kala duwan oo aqoonsiga qaranka Yuhuudda ayaa la soo jeedin karaa, laakiin aragtidooda kuwani waa sifooyin lama filaan ah, taas oo ah, maaha kuwo muhiim u ah ujeedada qeexida qaranka. Xataa kuwa aan u fiirsan iyaga waa Yuhuudi si ay uga mid noqdaan fikradda sarbeebta Yuhuudda. Si kasta oo aan la fileyn, su'aasha aqoonsigu waa mid shisheeye u ah fikirka dhaqanka.
Dhanka kale, kuwa leh hab-dhaqanka caadiga ah, kuwa aan rumaysnayn jacaylka metaphysical, waxay u baahan yihiin qeexitaanno, shuruudo iyo sifooyin dheeraad ah oo ay ku xukumi karaan cidda ka tirsan aqoonsigan qaran iyo kuwa aan ahayn. Waana sababta ay isu weydiinayaan maxaan Yahuud u nahay. Haddaysan ahayn metaphysics-ka, waa maxay? Laakin aqoonyahannadu ma helaan qeexitaan macquul ah oo caynkaas ah, sidaas darteedna waxay ku yimaadaan fikradaha aqoonsiga male-awaalka ah. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay qaataan qeexitaan aan u muuqan inay tahay sii socosho dabiici ah oo aqoonsiga Yuhuudda sidii loo arkay kumanaanka sano ee inaga horreeyay. Akhrinta buugaagta Amos Oz, ku hadalka Cibraaniga, u adeega ciidanka iyo bixinta canshuuraha dawladda, lagu silciyo Holocaust, iyo laga yaabee sidoo kale in lagu dhiirigeliyo ilaha Tawreed, waa sifooyinka aqoonsiga Yuhuudda maanta. Taasna waa in lagu daro taariikhda iyo abtirsiinta guud. Waa xaqiiqo, tanina waa waxa dhabta ah ee lagu garto Yuhuuda waqtigeena (inkasta oo aysan hubaal ahayn dhamaantood). Hadday sidaas tahay, aragtidooda aqoonsiga qaranku sidoo kale waa nooc ka mid ah xaqiiqooyinka, sida habka metaphysical, marka laga reebo in halkan ay tahay xaqiiqo nafsi-taariikheed oo aan ahayn xaqiiqo metaphysical.
Laba su'aalood ayaa soo ifbaxaya oo la xiriira habka caadiga ah:
Sidee bay aqoonsigan qaran ka dhigan tahay sii socoshada muuqaalladeedii hore? Haddii kaliya aqoonsiga male-awaalka ah uu yahay saldhigga sii wadida, markaa kuma filna. Marka hore waa in aan qeexnaa kooxda ka dibna kaliya ayaan weydiin karnaa waxa ay yihiin. Laakin inta astaamuhu aysan jirin sideen u qeexnaa kooxda? Tani waa su'aal taagan iyadoon la helin xal lagu qanco, mana la heli karo xal lagu qanco oo loo helo sawir la isku raacsan yahay. Sida la sheegay, xitaa kuwa haysta jagada lagama maarmaanka ah ma haystaan ​​wax xal ah su'aashan, marka laga reebo in aysan haba yaraatee dhibin.
Qeexitaannadani miyay run ahaantii "qaban shaqada"? Ka dib oo dhan, qeexitaannadani run ahaantii ma taagnaan karaan imtixaan kasta oo muhiim ah. Ka fakar goobaha kor lagu soo jeediyay. Ku hadalka luqadda Cibraaniga hubaal maaha inay kala soocaan Yuhuudda, dhanka kale waxaa jira Yuhuud badan oo aan ku hadlin Cibraaniga. Xataa xidhiidhka Kitaabka Quduuska ah sidaas ma aha (Masiixiyadda ayaa si qoto dheer ugu xidhan, Yuhuud badanina kuma xidhna haba yaraatee). Bixinta canshuuraha iyo adeegga milatariga dhab ahaantii maaha in lagu sifeeyo Yuhuudda (Druze, Carabta, shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo muwaadiniinta kale ee aan Yuhuudda ahayn si fiican uma sameeyaan). Taa beddelkeeda, waxaa jira tiro yar oo Yuhuud ah oo wanaagsan oo aan samayn, oo qofna kama shakiyo diintooda Yuhuudda. Amos Oz iyo Baybalka waxaa lagu akhriyaa adduunka oo dhan, xitaa haddii aan lagu qorin luqaddii asalka ahayd. Dhanka kale, suugaanta Poland lagu qoray ma waxay la xiriirtaa Baybalka sidoo kale Yuhuudi? Haddaba maxaa soo haray?
Waxaa muhiim ah in aan halkan ku ogaanno in ay dhab ahaantii jiraan astaamo Yahuud ah, sida la odhan karo dabeecadda wadajirka ah ee dadyow kale oo badan. Laakin sifooyinku maaha kuwo qaran ahaan isku mid ah. Waxaa intaa dheer, si looga hadlo sifo dabeecadeed waa in marka hore la qeexaa kooxda la siiyay. Tan kale, waxaa jira dad badan oo adduunka ku nool oo la siiyay dabeecad ku dhici karta qeexida dabeecadda Yuhuudda, haddana qofna ma dhihi doono waa Yuhuudi. Kaliya markaan ogaano qofka Yuhuudi ah, waxaan eegi karnaa kooxda Yuhuudda oo aan weydiin karnaa haddii ay jiraan astaamo lagu garto. Waxa kale oo jira taariikh Yuhuudi ah iyo asal guud, laakiin kuwani waa xaqiiqo uun. Way adag tahay in dhammaan waxyaalahaas la qiimeeyo, mana cadda sababta waxaas oo dhan loogu arkay dhibaato jirta iyo inay yihiin wax qeexid u baahan. Xaqiiq ahaan waa run in Yuhuuda badankoodu asal iyo taariikh wadaagaan macno ahaan. Haddaba waa maxay? Ma bannaan tahay in qof yuhuudnimo laga sheego, xagga abtirsiinta iyo taariikhda? Haddii uu sidaas yahayna waa sidaas oo kale, haddii kalese maya.
Hadday sidaas tahay, xataa haddii aynu aad u furfurnayn oo debecsanaan lahayn, haddana way adag tahay in farta lagu fiiqo halbeeg fiiqan oo ah yaa Yuhuudi qaran ah macnaha qiimaha leh ee habka la isku raacsan yahay. Waxaa laga yaabaa in aan qaadano habka lagu aqbalo cilmi-nafsiga (iyo mararka qaarkood sidoo kale caafimaadka) ogaanshaha ogaanshaha, marka loo eego jiritaanka xaddi gaar ah oo sifooyin ka liiska la siiyey ka dhigan tahay qeexitaan lagu qanco aqoonsiga Yuhuudda? Sida aan kor ku muujiyey, way adag tahay in middan loo arko mid lagu qanci karo midkoodna. Midkeenna ma bixin karaa liiskan? Midkeenna ma sharxi karaa sababta lix ka mid ah liiskan sifooyinka looga baahan yahay, halkii toddoba ama shan? Waxaas oo dhan ka sii sarreeya, heerkani ma ku guulaysan doonaa in si la aamini karo loo kala saaro Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn? Si cad maaha (fiiri tusaalooyinka sare).
Sababtoo ah dabeecadda dhibaatada leh, qaar badan oo ka mid ah kuwa caadiga ah ayaa halkan ku soo noqda siyaalihii hidde-wadaha halakhic, taasoo la micno ah inay sidoo kale raadinayaan aqoonsiga Yuhuudda ee hooyada. Qaar kale waxay ku dhejin doonaan miyir-qabka shakhsi ahaaneed ee qofka: Yuhuudi waa kan dareensan oo isku sheega inuu Yahuud yahay. Wareegtada ku dhex dhisan iyo faaruqnimada qeexidani dhab ahaantii ma dhibayso kuwa caadiga ah. Heshiisyadu waxay diyaar u yihiin inay aqbalaan heshiis kasta, ha ahaado wareegtada ama mid aan macno lahayn mar kasta. ansaxnimadiisa waxaa sabab u ah in ay ku heshiiyeen. Laakiin waxa la filayaa in bulsho male-awaal ahi ay diyaar u tahay inay aqoonsigeeda ku salayso halbeeg male-awaal ah. Marka laga soo tago doodahaas oo dhan, weli waa xaqiiqo ama doodo madhan, kuwaas oo hubaal aan sharxeynin xiisadda jirta ee ku xeeran arrintan.
Rabbi Shach khudbaddiisa aan kor ku soo xusnay waxa uu weerar ku yahay qeexidda aqoonsiga Yuhuudda, wuxuuna sidaas u yeelay siyaalo xalaal ah. Asal ahaan waxa ay soo bandhigaysaa nooc ka mid ah mawqifka la taaban karo, laakiin aan daruuri ahayn metaphysical (aqoonsiga qaranka marka loo eego u heellanaanta qiyamka qaarkood). Wikipedia 'Hadalka Bakaylaha iyo Doofaarka' wuxuu qeexayaa falcelinta Rebbe of Lubavitch ee hadalka bakaylaha Rabbi Shach sida soo socota:
Lubavitcher Rebbe', Bar Plugata Rabbi Shach sanado badan, ayaa ka jawaabay hadalka khudbadiisa, oo uu ka jeediyaySabtida Ka bacdi in uu beit midrash. Rebbe ayaa sheegay in aan cidna loo ogoleyn in ay ka hadasho dadka Yuhuuda ah. Aragtida Yuhuuddu waa "Israa'iil, in kastoo dembigu Israa'iil yahay," reer binu Israa'iil waa "wiilka keliya" ee Ilaahow Oo kii ku hadlaa isagoo xukun ku jira, waa sida kan xukunka Ilaah u hadlayaa. Qof kasta oo Yuhuudi ah waa in lagu caawiyo sidii uu wax walba u ilaalin lahaa Awaamiirta Diinta, laakiin sinaba uma weerarin. Rebbe waxa uu ku macneeyay dadkii la faca ahaa "Udim oo dabku hadheeyey", iyo "Dhallaanka la qabtay, In aanay eed ku lahayn aqoontooda iyo hab-dhaqankooda ku wajahan diinta Yuhuudda.
Tani waa tusaale falcelin ka timid nooca metaphysical. Dhinaca kale, madaxweynihii wakhtigaas, Haim Herzog, waxa uu muujiyay jawaabta caadiga ah ee erayadii Rabbi Shach, markii uu la yaabay sida Yuhuudnimada kibbutzniks ee Kubilniks iyo gacan-ku-duubyadii dhidibada u taagay dawladnimada, ugana soo shaqeeyay ciidanka si daacadnimo leh. su'aal la weydiiyey. Haddaba Rabbi Shach muxuu u diyaarinayaa? Ma aqbalayo metaphysics-ka, mana rabo inuu noqdo caalim. Ma jirtaa doorasho saddexaad?
Fikradaha aan la qeexi karin ma jiraan?
Gabagabada cad ayaa ah in fikradda aqoonsiga qaran ee Yuhuuddu ay tahay mid aan la qeexi karin. Dabcan waa suurtogal in la soo bandhigo qeexitaanno kala duwan, mid kastaa wuxuu ku xiran yahay heerka hal-abuurkiisa, laakiin hubaal maaha in la isku raaco qeexitaan, iyo ugu yaraan inta badan kooxaha waxay u muuqdaan kuwo aan ka saarin kuwa aan buuxin qeexitaankooda. Israa'iil oo dhan (inta hooyadood ay tahay Yuhuudi). Tani miyay ka dhigan tahay in aqoonsiga noocaas ahi uu yahay mid male-awaal ah, taasoo la macno ah in aqoonsiga Yuhuudda aanu run ahaantii jirin? Ma ikhtiyaarka kaliya ee metaphysics-ka ama hab-dhaqanka halakhic sheekada? Ma hubo.
Su'aashani waxay ina geynaysaa maxsuul falsafadeed oo ah in aanay jirin meel laga soo galo halkan, markaa waxaan isku dayi doonaa oo kaliya inaan si kooban u taabto. Waxaan isticmaalnaa ereyo badan oo aan caddayn, sida fanka, caqli-galnimada, sayniska, dimuqraadiyadda iyo qaar kale oo badan. Si kastaba ha ahaatee marka aynu u dhawaano qeexida fikradda noocan oo kale ah waxaan la kulannaa dhibaatooyin la mid ah kuwa halkan lagu sharraxay. Qaar badan ayaa tan ku soo gabagabeynaya in fikradahani ay yihiin kuwo khayaali ah, oo xitaa ka dhisaan hareeraha qasri casri ah oo qurux badan (xidhiidhka fikradeed ee Rabbi Shagar maahan mid shil ah). Tusaalaha cad ee kan waa Gidcoon Ofrat buuggiisa, Qeexida fanka, Yaa bixiya daraasiin qeexitaanno kala duwan ah oo ku saabsan fikradda farshaxanka oo diidaya, ilaa uu ugu dambeyntii yimaado gabagabada in farshaxanku yahay waxa lagu soo bandhigay matxafka (!). Dhanka kale, Robert M. Piersig, buugiisa cibaadada Zen iyo farshaxanka dayactirka mootada, Wuxuu qeexayaa safar sarbeeb ah oo ah borofisar aftahan ah oo lagu magacaabo Phydros, kaas oo raadinaya qeexida fikradda tayada. Mar waxa uu soo maray iftiimin, isaga oo ku soo gunaanaday in falsafadda Giriiggu ina keentay dhalanteed ah in fikrad kastaa ay tahay in ay leedahay qeexitaan, iyo fikrad aan qeexitaan lahayn si fudud ma jirto (waa la malaynayaa). Laakiin fikradda tayada la mid ah malaha lama qeexi karo, haddana wuu diiday inuu aqbalo gabagabada in ay tahay fikrad aan lahayn nuxur dhab ah. Heshiis kaliya. Waxaa cad in ay jiraan xiriiro tayo leh oo ay jiraan qaar aan lahayn. Si la mid ah, waxaa jira shaqooyin farshaxan, waxaana jira shaqooyin farshaxan oo qiimo jaban. Gabagabadii ayaa ah in fikradaha sida tayada, ama farshaxanka, in kasta oo ay adag tahay oo laga yaabo in aan la qeexi karin, ay weli jiraan. Looma maleynayo.
Waxay u muuqataa in sheegasho la mid ah sidoo kale laga samayn karo macnaha guud ee aqoonsiga qaranka. Waxa la aqbali karaa qoraalka muhiimka ah ee ah in uu jiro aqoonsi qaran iyada oo aan loo baahnayn metaphysics-ka. Aqoonsiga qaranku waxa uu leeyahay astaamo kala duwan, wayna adagtahay in qeexid loo bixiyo, haddana maaha wax ku saabsan male-awaal ama heshiisyo, mana aha qasab in laga hadlo metaphysics-ka. Waxa ay noqon kartaa fikrad dhab ah oo aan la qiyaasi karin oo ay adag tahay ama aan macquul ahayn in la qeexo. Waxay ila tahay in qeexid la mid ah oo la taaban karo ay hoosta ka xariiqayso ra'yiga Rabbi Shach (in kasta oo uu soo jeedinayo qeexitaan xalaal ah, oo aanu aqbalin suurtagalnimada qeexitaan qaran oo kale). Waxa uu ku doodayaa in uu jiro qeexitaan lama huraan ah oo aqoonsiga Yuhuudda, iyo xitaa dalabaadka dadka sheegashooyinka ku salaysan. Dhanka kale, uma arko metaphysics beddelka lagu qanco. Aniga nafteyda, uma jeedo inaan sidaas u fekero. La'aanteed metaphysics-ka ma arko sida qofku uga hadli karo hay'ad qaran xagga macnaha ontological. Laakiin waxaa ii cad in qaar badan ay igu khilaafeen arrintan.
Ilaa hadda falsafada. Laakiin hadda ayaa imanaysa su'aasha xigta: Maxay waxaasoo dhan muhiim ugu yihiin haba yaraatee? Maxay tahay sababta aan u qeexno, ama xitaa isku dayno inaan fahanno, aqoonsiga Yuhuudda? Jawaabtaydu waa in aanay waxba dhaamin. Su'aashan wax raad ah oo ay ku yeelan karto ma jirto, waxayna ugu badnaan tahay arrin lagu falanqeeyo garaadka (sida caadiga ah madhalays, iyo xataa madhan nuxurka). Haddii aan ku dembaabo cilmi-nafsiga kursiga armaajada, raadinta aqoonsiga Yuhuudda waa muujinta dareenka ka go'naanta diinta Yuhuudda iyo taariikhda iyada oo aan diyaar u ahayn in lagu dhaqo. Dadku waxay raadinayaan beddelka aqoonsiga hore ee diinta, si ay u dareemaan Yuhuudda ka dib daadinta aqoonsiga iyo ballanqaadka diimeed. Si taas loo gaaro, su'aalo cusub iyo fikrado cusub ayaa la ikhtiraacay, waxaana dadaal badan oo aan faa'iido lahayn la geliyay sidii loo kala saari lahaa.
Fikradayda, ma jirto si looga wada hadlo dood caqli-gal ah oo ku saabsan aqoonsiga Yuhuudda, oo hubaal ah in aan la gaarin go'aamo ku saabsan, taas oo sidoo kale aan run ahaantii muhiim ahayn. Haddii uu shirweyne yahay maxaa looga doodayaa heshiisyada. Mid walba wuxuu saxiixi doonaa heshiisyada u muuqda isaga. Haddii ay tahay metaphysics, ma arko sida loo heli karo dood iyo dood. Xitaa haddii aan aqbalno ra'yi la taaban karo oo Yuhuudi ah (oo ka soo horjeedda halaqic) aqoonsiga Yuhuudda, tani mar kale lama heli karo qeexitaanno, in laga doodo, oo hubaal maaha go'aan la isku raacay. Kuwani waa soo jeedinno semantic ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin kuwo aan sal lahayn, iyo kuwo kale oo gebi ahaanba madhan nuxurka, ama aan u istaagin imtixaanka wax macquul ah. Intaa waxaa dheer, sida aan tilmaamay, waxaas oo dhan ma laha macno la taaban karo si kastaba ha ahaatee. Kuwani waa halgankii nafsiga ahaa ee dadku ay naftooda kula jireen, wax kale ma jiraan.
Dooddan aan loo baahnayn ee aan muhiimka ahayn ayaa hadda loo isticmaalaa in lagu dhufto qofka ka soo horjeeda. Qof kasta oo raba inuu kor u qaado fikradaha hantiwadaagga - wuxuu inoo sharxayaa dhammaanteen in diinta Yuhuudda ay weligeed ahaan jirtay hantiwadaag, qof kasta oo aan sidaas ahayna uusan ahayn Yuhuudi. Kuwa kale ee xiiseeya fikradaha militariga waxay sidoo kale ku faanaan diinta Yuhuuda iyo aqoonsiga Yuhuuda. Waxa sidaas ah dimuqraadiyadda, sinnaanta, hanti-wadaaga, xorriyadda, furfurnaanta, jujuubka, sama falka iyo naxariista, caddaaladda bulshada, iyo dhammaan qiyamka sare ee kale. Marka la soo koobo, Yuhuuddu waxay iftiin u tahay dadka aan Yuhuudda ahayn, laakiin dabeecadda iftiinkaas asal ahaan waa mid aan muran lahayn oo aan go'aan lahayn. Si ka duwan khilaafyada kale, kuwaas oo noqon kara siyaabo lagu caddeeyo oo sidoo kale yeelan kara qiimo ku jira, muranka ku saabsan aqoonsiga Yuhuudda mabda'a aan la xallin oo aan muhiim ahayn macno kasta.
Hal shay ayaa si macquul ah u cad: midna liisaskan qiyamka ah (bulsho ahaan, militariga, cadaalada bulshada, sinnaanta, xorriyadda, iwm.), ama qiimo kasta oo kale, ma noqon karo qayb lagama maarmaan ah, lagama maarmaan ama ku filan qeexida Aqoonsiga Yuhuudda. Qof kasta oo aaminsan mid ka mid ah qiyamkan ama wax kasta oo isku dhafan oo iyaga ka mid ah waxay noqon karaan quruun qurux badan dhammaan fikradaha iyo muran la'aan. Ma jirto wax ka mamnuuc ah in la noqdo shucuub hantiwadaag ah, u ololeeya sinnaanta ama xorriyadda, militariga ama maya. Sidaa darteed, dhammaan kuwan maaha shuruudo khuseeya aqoonsiga Yuhuudda, xitaa haddii wax aan la rumaysan karin ay dhacaan (oo ha ka baqin, ma dhici doonto, malaha ma dhici doonto) oo qof ayaa awoodi doona inuu caddeeyo dhaqanka Yuhuudda iyo ilaha in mid ka mid ah kuwan uu dhab ahaantii qayb ka yahay barnaamijka aqoonsigan.
Aqoonsiga Yuhuudda ee waqtigeena
Guntii iyo gebagebadii waxa weeye, in dooda qaranku tahay mid aan waxba tarayn oo aan qiimo lahayn. Sidaan horeyba u soo sheegay, isla sidaas oo kale ayaa la mid ah marka la eego aqoonsiga diinta. Qof kasta oo hooyo Yuhuudi ah dhashay ama si qumman u soo noqday waa inuu dhawraa amarrada Tawreed iyo hadalka xikmadaha oo yuusan xadgudbin. waa taas. Qeexitaannada nin, aqoonsigiisa, iyo khudaarta kale, waa arrin shakhsi ahaaneed, oo waxay noqotaa mid nafsi ah, metaphysical, caadi ah, ama laga yaabee xitaa mid amorphous ah (aan la qeexi karin) amorphous. Dhammaan fursadaha waxay noqon karaan kuwo sax ah, sidaas darteed sidoo kale ma jirto wax faa'iido ah oo laga hadlayo iyaga.
Aynu ka fiirsanno waxa ka dhalan kara doodda noocaas ah? In qof uu dareemi doono ku qanacsanaanta inuu yahay Yuhuudi wanaagsan? Dareenka fiicnaanta waa arrin khuseeysa cilmi-nafsiga. Wada-hadallada ku saabsan aqoonsiga ee macnaha qiimaha waa macne madhalays ah oo madhan, sidaas darteedna aan loo baahnayn. Haddii macno la taaban karo la bixiyo taas oo aan xiisayneyno qeexida aqoonsiga, markaas waxaa suurtogal ah (malaha) in laga hadlo su'aalaha khuseeya. Laakiin inta ay tahay dood guud, qof kastaa wuxuu u qeexi doonaa diinta Yuhuudda siduu rabo. Xataa haddii uu mid saxan yahay midna uu khaldan yahay, su’aashani waa in aanay cidna danayn, marka laga reebo dhawr cilmi-baarayaal cilmi-nafsi ah oo nolol maalmeedkooda ka soo saara falanqaynta semantiga. Midda kale, yaan ahay aniga oo faragelinaya dadaalkan geesinimada leh ee aan waxba tarayn? Sisyphus sidoo kale waa qayb ka mid ah aqoonsi dhaqameedkeena…
 Eldad Beck oo ka yimid Jarmalka, YNET, 1.2.2014.
 Hannaanka cilmaaniyeedku wuxuu kor u qaadaa arrimaha aqoonsiga diineed ee cilmi-baarista (ma waxay la macno tahay Protestant, Muslim, ama Catholic, Cilmaani?).
 Haddii aan la macaamileyno qeexitaanno, markaa dabeecadda mitzvos ee su'aasha ah iyo dhiirigelinta ilaalintooda ayaa aad muhiim u ah. Xitaa haddii sharcigu u baahan yahay anshaxa akhlaaqda, uma badna in lagu qeexo diinta Yahuudda tan iyo markii ay ka wada siman yihiin adduunka oo dhan. Xitaa mitzvot sida dejinta Eretz Israa'iil, kuwaas oo aan ahayn dabeecad akhlaaqeed, ma qeexi karaan aqoonsiga diinta Yuhuudda, maadaama ay sidoo kale ka jirto kuwa aan isku qeexin qayb ka mid ah diinta Yuhuudda, sababtoo ah xaalado badan oo dhiirigelin ah. waayo jiritaankoodu waa isku meel.
 In kasta oo beddelaaddu ay iyaduna tahay geeddi-socod laftigeedu uu muran ka taagan yahay sida arrimo badan oo xalaal ah, haddana waxa nagu filan baahidayada.
 Tani ma joojin in buuga loo tarjumo labaatan luqadood iyo ku guuleysiga abaal-marinnada adduunka oo dhan.
 Fiiri, adigoo xiganaya warqadda Eldad Beck ee kor lagu soo xigtay.
 Sida ugu wanaagsan ee aan xasuusto, madaxweynihii wakhtigaas, Haim Herzog, isaga oo ka jawaabaya hadalka bakaylaha, iyo qaar kale oo badan ilaa maanta, wuxuu xusay "qiyaasta." Qofkasta oo leh xoogaa dareen macquul ah ayaa la yaabay dhacdadan soo jiidashada leh. Waxaan rabnaa in aan qeexno fikradda Yuhuudda, oo sidaas u yeelo sidan soo socota: dhammaan a la dhigi karo booska X ee qaabkan soo socda: "X oo dareemay X" iyo tilmaanta ayaa soo baxday run, waa Yuhuudi. Marka loo eego qeexitaankan, noole kasta oo is-og oo aan been isu sheegin waa Yuhuudi (hubi kooxda meelaynta).
 Waxaa suurtogal ah in aan sidoo kale fahamno Gideon Ofrat gabagabada sare. Laga yaaba in aanu odhanayn wax fan la yidhaah ma jiro, balse waxa uu ku soo gunaanadayaa oo kaliya in dooda laga hadlayo ay tahay mid aan loo baahnayn oo aan midho dhal ahayn.
3 Fikradaha ku saabsan "Aqoonsiga Yuhuudda ee Waqtigeenna iyo Guud ahaan"
H. Bayer 22 - 04/2018/21 saacadu markay tahay 59:XNUMX
Rabbi ma awoodo inuu sharaxo qoraalka 7 mar kale?
H. Bayer 23 - 04/2018/07 saacadu markay tahay 06:XNUMX
Markaad Yuhuudi ku qeexdo inuu Yahuud isu haysto, waxba ma aad odhan. Erayada qeexidda lagu isticmaalo waa in la yaqaan ka hor iyo la'aanteed. Haddaba haddaynu ka soo qaadno in ereyga Yahuud yahay X oo qeexitaanku u baahan yahay in la caddeeyo, markaa asal ahaan waxa aad ku sheegtay qeexidaas in Yahuudigu yahay X oo u malaynayo inuu yahay X.
19 Tammuz 07 - 2019/10/26 saacada XNUMX:XNUMX
kuma raacsani Si loo aqoonsado shay aan sinaba loo qeexin. Kabbalah waxa ku jira qeexitaan rabaani ah iyo dhaldhalaal iwm. Mar haddii qofku uu ku hadlayo Tawreed aan caddayn markaa waa qeexid aan macno lahayn. Waxaa hubaal ah in uu jiro qeexitaan. Laakiin hadda keeni maayo. Waxa ka maqan qeexitaan macnaheedu waxa weeye in aanu jirin mabda’ mideeya qof walba si uu mid u garto. Oo sidaas daraaddeed ma jiro hal hayb oo dhan. Waxaa jira nafkamina aqoonsiga Yuhuudda. Sababtoo ah xaqiiqda ah in aan isu arko in aan ahay Yuhuudi oo aan shaki ku jirin qof kale in uu Yahuud yahay. Tan waxaan isku xirayaa isaga iyo markaan sameeyo fal gaar ah oo aan ku qeexo ficil Yuhuudi ah, ka dibna waxaan ku idhi Yuhuudi, qayb ka mid ah qiyamkiisa Yuhuudda waa inuu sameeyo falalkan. Taas oo aan qasab ahayn run sababtoo ah bisad tusaale ahaan waxa ay u dhaqantaa si xishood leh iyada oo aan ka tirsanayn diinta xishoodka si kastaba ha ahaatee qofku waxa uu awood u leeyahay in uu u dhaqmo sida eeyga oo uu wax ku cuno sagxada rabitaan ah inuu gaaro ujeedo kale. Inkasta oo dariiqa uu doortay uu ka soo horjeedo dabeecadda.
Haddii uu Yuhuudu runtii isu arko inuu yahay Yuhuudi cusub oo uu ka gooyay aqoonsiga Yuhuudda, kan kale, tusaale ahaan, ma isticmaali doono sharciga soo noqoshada. Gaar ahaan haddii ay tahay mid ka baxsan hay'adaha dawladda sida dawlad Yuhuudi ah. Laakiin marka xiriirka la gooyo markaas waxaa loo yaqaan jinsi iyo sida uu qabo sharciga Yuhuudda waa in loo sababaa dhimasho aan toos ahayn.
Markaa haddii aynu dhammaanteen isu aragno sida Yuhuudda. In kasta oo ay kala duwan yihiin haddana waxaa jira hal shay oo dhammaanteen aan ka wada simannahay taas oo ah waxa nagu kalifay in aynaan ka tanaasulin qeexida Yuhuudda. Iyo inaan isku xidhno nafteena waxay ku xidhan yihiin dhammaan Yuhuudda adduunka. Tani maaha qeexitaan sharci ah sababtoo ah xitaa Yuhuuda oo aan aqoonsanayn sharciga ayaa qirta. Tani waa qeexida hab-nololeedka ay Yuhuudda oo dhammi rabaan. Tani waa qeexitaan ku leh noloshiisii ​​sida Yuhuudiga xitaa haddii ay tahay kaliya marka la raadinayo qeexidan. Si kastaba ha ahaatee, waa xarunta qiimaha. Haddi la isku dayo in la garto ama la isku dayo in la iska indho tiro xoog. Sababtoo ah taasi sidoo kale waa dabeecad. Dhanka kale, qiyam aanu xidhiidh la lahayn ma diido waxa aanu ka fikirin haba yaraatee mana maareeyo khilaafyada.
Ku biir 3,095 macaamiil dheeraad ah
Aamiin yaa rabi
Xisbiga Carabta ee dawladda
mikyab Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Hananeel Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Waa kuma hitchhiker? Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)